Puntland oo soo saaray liiska musharixiinta Aqalka Sare ee Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Puntland oo soo saaray liiska musharixiinta Aqalka Sare ee Baarlamaanka
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo saaray liiska tartamayaasha Aqalka sare ee baarlamaanka oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah.
Liiskan oo ka kooban 30 xubnood oo ah musharixiin ayaa ku tartamaya illaa iyo 11 kursi oo Maamulka Puntland ku leeyahay Aqalka Sare.
Magacyada liiska ee caanka ah ayaa waxaa kamid ah Ra’iisal wasaare Cumar Cabdrashid Cali,Madaxweynihii hore ee Puntland C/maan Sh.Maxamed Faroole,gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad, General Maxamed Siciid Xirsi Morgan iyo qaar kale.
Musharixiintan ayaa kuraasta ay u tartamayaan waxaa qaarkood ay yihiin labo ruux halka meelaha qaarkood saddex illaa afar musharax ay ku tartami doonaan hal kursi.
War Deg-deg ah; Hoobiyaal ku dhacay xaafada Buuloxuube ee degmada Wadajir